Martial Arts Books in Myanmar | Thaing Wizard
ဒီ pageလေးမှာ ကျွန်တော်တို့ Thaing Wizard မှ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသော သိုင်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ ebook များနှင့် အခြားနေရာတစ်ချို့မှ ရရှိခဲ့သော သိုင်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ ebook များကို စုစည်းပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းက ကျွန်တော်ဆိုဒ် website မှ ပြုလုပ်ခဲ့သော ebook တိုင်းသည် A4 ဆိုဒ်နှင့် print ထုတ်ယူ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အများစုမှာ ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြု၍ ဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်ရာ အားလုံးအဆင်ပြေစေရန်အတွက် မူရင်းစာအုပ်ဆိုဒ်အတိုင်း ဖန်တီးထားသည့် ebook များကို ထပ်မံပြုလုပ်ကာ update လုပ်ထားပါသည်။ Ebook များကို စာအုပ်နှင့် ဆောင်းပါးဟူ၍ အုပ်စုနှစ်စုခွဲကာ တင်ပြပေးထားပါတယ်။
အပတ်စဉ် သောကြာနေ့တိုင်း update လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ scan ဖတ်ပြီးသားတွေ ကျွန်တော့်ဆီကို ပို့ထားတာတွေရော၊ scan ထပ်ဖတ်ထားတာတွေရော ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေလည်း ebook အနေနဲ့ ဆက်လက် ပြုလုပ်တင်ဆက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေ scan ဖတ်ပြီး ပုံတွေပေးပို့ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း thaingwizard@gmail.com ကို email ပို့ထားနိုင်ပါတယ်။ File Size လည်း မကြီးစေဘဲ Quality ကောင်းအောင် ကြိုးစားပြီးလုပ်ပေးပါ့မယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးပါ။
၁။ ဓားရေး ၃၇ ချင်း လူးတား (လင်္ကာ) နှင့် အဓိပ္ပါယ် စကားပြေ
Download (File Size – 370 KB)
၂။ မြန်မာ့ ရိုးရာလက်ဝှေ့ (မြဝင်း)
Download (File Size – 3.25 MB)
၃။ မြန်မာ့ထိုးကွင်းမင်ကြောင်ဓလေ့ (ဆင်ဖြူကျွန်းအောင်သိန်း)
၄။ မြန်မာနိုင်ငံသိုင်း အဖွဲ့ချုပ် မြန်မာ့ကိုယ်ခံပညာ နိသျည်းများ
မြန်မာနိုင်ငံသိုင်း အဖွဲ့ချုပ် မြန်မာ့ကိုယ်ခံပညာ နိသျည်းများ
၅။ လျှို့ဝှက်သော ဗန်တို၊ ဗန်ရှည် နည်းများ (သိုင်းဦးချစ်သန်း)
လျှို့ဝှက်သော ဗန်တို၊ ဗန်ရှည် နည်းများ (သိုင်းဦးချစ်သန်း)
၆။ ကိုယ်တွေ့ဗမာ့သိုင်းပညာများ (ဦးအောင်သိန်း)
Download (File Size – 10.1 MB)
၇။ ဓားနှစ်လက်သိုင်း (ဦးပြည်သိမ်း)
Download (File Size – 15.6 MB)
၈။ မြန်မာ့ဓား (ဆရာကြီးမင်းယက္ခ)
Download (File Size – 14.5 MB)
၉။ တိုင်းရင်းမေ ဗန်တို (မနီနီ ရေးသားပြုစုပြီး သိုင်းဦးချစ်သန်း တည်းဖြတ်သည်)
တိုင်းရင်းမေ ဗန်တို (မနီနီ ရေးသားပြုစုပြီး သိုင်းဦးချစ်သန်း တည်းဖြတ်သည်)
Download (File Size – 47.7 MB)
၁၀။ သိုင်းပြောင်းပြန် ပြောင်းပြန်မောင်လေး
သိုင်းပြောင်းပြန် ပြောင်းပြန်မောင်လေး (ပွင့်လန်း -သတ္တုတွင်း)
Download (File Size – 13.2 MB)
၁၁။ မောင်လေးဆိုတဲ့ ပြောင်းပြန်မုန်တိုင်း
မောင်လေးဆိုတဲ့ ပြောင်းပြန်မုန်တိုင်း (ပွင့်လန်း -သတ္တုတွင်း)
၁၂။ ကမ္ဗောဇနန်းတွင်းခူးခါချန့် သိုင်းပြောင်းပြန်လက်သိုင်း [ပထမတွဲ]
Download (File Size – 132 MB)
၁၃။ ရှောင်လင်ကွန်ဖူး သိုင်းငါးမျိုး (ဦးချစ်သန်း)
ရှောင်လင်ကွန်ဖူး သိုင်းငါးမျိုး (ဦးချစ်သန်း)
၁၄။ ထိုင်း လက်ဝှေ့ (ကွန်ဖူးစိုးမြင့်)
ထိုင်း လက်ဝှေ့ (ကွန်ဖူးစိုးမြင့်)
၁၅။ လူတိုင်းအတွက် လျှပ်တစ်ပြက် ကိုယ်ခံပညာ (ကွန်ဖူးစိုးမြင့်)
လူတိုင်းအတွက် လျှပ်တစ်ပြက် ကိုယ်ခံပညာ (ကွန်ဖူးစိုးမြင့်)
၁၆။ ဂျီကွန်ဒို (ကွန်ဖူးစိုးမြင့်)
Download (File Size – 12.5 MB)
၁၇။ ကိုရီးယားအဆင့်မြင့် ခြေကန်တိုက်နည်းပညာ (ဦးပြည်သိမ်း)
ကိုရီးယားအဆင့်မြင့် ခြေကန်တိုက်နည်းပညာ (ဦးပြည်သိမ်း)
၁၈။ အမေရိကန် ချက်ကောင်း တိုက်ကွက်များ (ကွန်ဖူးစိုးမြင့်)
အမေရိကန် ချက်ကောင်း တိုက်ကွက်များ (ကွန်ဖူးစိုးမြင့်)
၁၉။ အမျိုးသမီးများအတွက် အရေးပေါ်ခုခံတိုက်ခိုက်နည်းပညာ (ကွန်ဖူးစိုးမြင့်)
အမျိုးသမီးများအတွက် အရေးပေါ်ခုခံတိုက်ခိုက်နည်းပညာ (ကွန်ဖူးစိုးမြင့်)
၂၀။ ဘီလီ၀ုဒ္ ၏ နဘမ္းသတ္နည္း (ဦးလွဒင္)
ဘီလီ၀ုဒ္၏ နဘမ္းသတ္နည္း (ဦးလွဒင္)
Download (File Size –5MB)
၂၁။ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် ထိုက်ချိချွမ် အခြေခံ(၈)ကွက် (မြန်မာနိုင်ငံဝူရှူးအဖွဲ့ချုပ်)
သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် ထိုက်ချိချွမ် အခြေခံ(၈)ကွက် (မြန်မာနိုင်ငံဝူရှူးအဖွဲ့ချုပ်)
Download (File Size – 2.3 MB)
၁။ ကမ္ဘောဇ နန်းတွင်း ခူးခါချန့် သိုင်းပြောင်းပြန်၏ အခြေခံ ကျင့်စဉ်များ
ကမ္ဘောဇ နန်းတွင်း ခူးခါချန့် သိုင်းပြောင်းပြန်၏ အခြေခံ ကျင့်စဉ်များ
Download (File Size – 843 KB)
၂။ မြန့်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့ပညာကျင့်စဉ်များ -၁- နှင့် -၂-
Download (File Size – 386 KB)
၃။ နှစ်ဆင့်ထိုးနည်းနှင့် လက်လှည့်ထိုးနည်း
Download (File Size – 423 KB)
၄။ ဓားရေး(၃၇)ချင်း၏ အခြေခံဓားရေးများ (ထင်လင်းမောင်)
ဓားရေး(၃၇)ချင်း၏ အခြေခံဓားရေးများ (ထင်လင်းမောင်)
Download (File Size – 456 KB)
၅။ ထိုက်ကျိသမိုင်းအကျဉ်း (ကိုဝိ)
Download (File Size 2.62 MB)
၆။ ကျန်းမာရေးနှင့် ဝူရှူးပညာ (ကိုရန်လင်း)
ကျန်းမာရေးနှင့် ဝူရှူးပညာ (ရန်လင်း)
Download (File Size – 344 KB)
၇။ အတွင်းအားပညာနှင့် ထူးခြားသော လျှို့ဝှက်ကျင့်စဉ်များ
အတွင်းအားပညာနှင့် ထူးခြားသော လျှို့ဝှက် ကျင့်စဉ်များ
Download (File Size – 3.92 MB)
၈။ “ချီ”အားတိုးအောင် ကျင့်နည်းများ – A Method of Increasing Chi (ဦးပြည်သိမ်း)
“ချီ”အားတိုးအောင် ကျင့်နည်းများ (ဦးပြည်သိမ်း)
Download (File Size – 1 MB)
၉။ သမိုင်းထဲက အမေ့လျော့ခံ အားကစား (သို့မဟုတ်) ဗန်တို
သမိုင်းထဲက အမေ့လျော့ခံ အားကစား (သို့မဟုတ်) ဗန်တို
၁၀။ ဂါမဝါသီပွဲကျောင်း လက်ဝှေ့၊ သိုင်းအတတ်ပညာ အကျဉ်း
ဂါမဝါသီပွဲကျောင်း လက်ဝှေ့၊ သိုင်းအတတ်ပညာ အကျဉ်း
၁၁။ ဆရာကြီး ဗန်မော်သိန်းအောင်၏ လျှပ်စစ်လက်သီးထိုးနည်း
ဆရာကြီး ဗန်မော်သိန်းအောင်၏ လျှပ်စစ်လက်သီးထိုးနည်း
၁၂။ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သည့် မြန်မာ့ကြေးစားလက်ဝှေ့ကျော် မောင်သောင်း (ဉာဏိန္ဒ)
ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သည့် မြန်မာ့ကြေးစားလက်ဝှေ့ကျော် မောင်သောင်း (ဉာဏိန္ဒ)
၁၃။ ဂျူဒို ထွန်းရွှေ (ကြည်ဝင်း)
ဂျူဒို ထွန်းရွှေ (ကြည်ဝင်း)
Download (File Size –2MB)
၁၄။ လက်နက်ဂမ္ဘီရ (ဖုန်းရွှီအောင်)
Download (File Size – 1.7 MB)
၁၅။ ဓား၏လျှို့ဝှက်ချက်များ (ရှိုင်းအောင်)
Download (File Size – 1.3 MB)
၁၆။ မြန်မာ့နန်းတွင်း မြင်းခင်းပွဲတော် (မြေလတ်မြတ်သူ)
မြန်မာ့နန်းတွင်း မြင်းခင်းပွဲတော် (မြေလတ်မြတ်သူ)
Download (File Size – 4.2 MB)
၁၇။ ကရာတေးဘိုးအေ… ရှောင်လင် သိုင်းပညာ (ကြည်ဝင်း)
ကရာတေးဘိုးအေ… ရှောင်လင် သိုင်းပညာ (ကြည်ဝင်း)
၁၈။ တစ်ကိုယ်တော်ရိုနင်-၁ (အောင်ကျော်)
Download (File Size – 3.6 MB)
၁၉။ တစ်ကိုယ်တော်ရိုနင်-၂ (အောင်ကျော်)
Download (File Size – 2.6 MB)
၂၀။ ဓားဝိဇ္ဇာ မူဆာရှိ၏ ဓာတ်ကြီး(၅)ပါးကျမ်းတော် (ဒီပံလင်း)
ဓားဝိဇ္ဇာ မူဆာရှိ၏ ဓာတ်ကြီး(၅)ပါးကျမ်းတော် (ဒီပံလင်း)
Download (File Size – 4.6 MB)
၂၁။ မြတ်သောအတတ် မချုပ်ပြတ်ရာ (ကိုနိုင်း-ချင်းတောင်)
မြတ်သောအတတ် မချုပ်ပြတ်ရာ (ကိုနိုင်း-ချင်းတောင်)
Download (File Size –3MB)
၂၂။ တုတ်တို စံလှ (မျိုးသစ်)
တုတ်တို စံလှ (မျိုးသစ်)
Download (File Size – 6.2 MB)
၂၃။ ထိုက်ကျိသိုင်းဆရာကြီး ကျန်းဆန်းဖုန်း (ကြည်ဝင်း)
ထိုက်ကျိသိုင်းဆရာကြီး ကျန်းဆန်းဖုန်း (ကြည်ဝင်း)
၂၄။ လီရှောင်လုံ (နဂါးလေး) (ကြည်ဝင်း)
လီရှောင်လုံ (နဂါးလေး) (ကြည်ဝင်း)
Download (File Size – 1.5 MB)
၂၅။ ရှောင်လင်ကွန်ဖူးသိုင်းဆရာကြီး စင်လီချိုင် (ကြည်ဝင်း)
ရှောင်လင်ကွန်ဖူးသိုင်းဆရာကြီး စင်လီချိုင် (ကြည်ဝင်း)
Download (File Size – 3.5 MB)
၂၆။ ဓားကိုက်နတ်ကြီး ဥရုရှီးဘား (ကြည်ဝင်း)
ဓားကိုက်နတ်ကြီး ဥရုရှီးဘား (ကြည်ဝင်း)
Download (File Size – 2.5 MB)
၂၇။ ကြိုးဝိုင်းနည်းဗျူဟာ (ဘာမထီခင်အောင်-ရွှေဘို)
၂၈။ ပရိုဘောက်ဆင်ပွဲများ ပေါ်ထွန်းလာရေး (ဘာမထီခင်အောင်-ရွှေဘို)
ပရိုဘောက်ဆင်ပွဲများ ပေါ်ထွန်းလာရေး (ဘာမထီခင်အောင်-ရွှေဘို)
၂၉။ ကိုယ်ခံပညာနှင့် အကြောကိုင်ပညာ (ဆရာရန်နိုင်-Dragon King)
ကိုယ်ခံပညာနှင့် အကြောကိုင်ပညာ (ဆရာရန်နိုင်-Dragon King)
Download (File Size – 2.2 MB)
၃၀။ စိတ်စွမ်းအင် သမာဓိဝင် ကျင့်စဉ်များ (သူ့ကျော်ရှင်း)
စိတ်စွမ်းအင် သမာဓိဝင် ကျင့်စဉ်များ (သူ့ကျော်ရှင်း)
Download (File Size – 4.1 MB)
၃၁။ ရှောင်လင်လက်သီး(၁၆)ချက် (ကြည်ဝင်း)
Download (File Size – 4.3 MB)
၃၂။ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်က သိုင်းပြောင်းပြန်သင်တန်း (ဦးတင်မြင့်)
ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်က သိုင်းပြောင်းပြန်သင်တန်း (ဦးတင်မြင့်)
191 thoughts on “Martial Arts Books in Myanmar”
dragon on October 20, 2015 at 12:25 am said:
kyawlin on January 3, 2016 at 2:56 pm said:
အကိုေရ သိုင္းဦးခ်စ္သန္းရဲ႕ အကြက္သိုင္း စာအုပ္ေလး တင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ကြ်န္ေတာ္က နယ္ကျဖစ္ေနေတာ့ အကိုတို႕လိုပညာျဖန္႕ေဝသူေတြ ကိုအားကိုၿပီးေလ့လာေနရတာျဖစ္လိုပါ ေက်းဇူးျပဳ၍တင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ
mgaungkyaw on January 21, 2016 at 1:12 pm said:
အရမ္းေကာင္းပါတယ္ စိတ္ ဝင္စားမိတာေလးေတြေဒါင္းသြားပါတယ္
ျမန့္မာ့ရိုးရာ ပညာရပ္မ်ားတဲ႔ ပညာရွင္မ်ား
ရွည္ၾကာစြာ တဘ္တံ႔ျပန့္ပြါးပါေစလို့ ဆႏဒျပုပါတယ္
Min min on February 9, 2016 at 10:07 am said:
aungaungmooe on February 19, 2016 at 10:45 pm said:
Love Neo on April 4, 2016 at 10:40 pm said:
ေျပေလး on May 25, 2016 at 7:38 pm said:
ထက္သူရ on May 27, 2016 at 10:28 am said:
စိုင္းထက္ on May 27, 2016 at 10:33 am said:
kaung on June 4, 2016 at 9:42 am said:
kaung on June 4, 2016 at 9:45 am said:
Thuhtoosan on December 1, 2016 at 8:06 am said:
Thi ha tun on December 4, 2016 at 9:24 am said:
ေသနတ္မွာေမာင္းျပန္ သုိင္းမွာေျပာင္းျပန္ စာအုပ္ေလးတင္ေပးပါလား။
minkhoung on January 19, 2017 at 10:31 pm said:
Myo win on January 23, 2017 at 2:14 pm said:
Myo win on January 23, 2017 at 2:15 pm said:
ေမာင္ေအာက္ေက်ာ္ on December 11, 2017 at 1:12 am said:
အခူလ်ူေလ့လာရတာ ေက်းဇူးလဲ အထူးတင္ပါတယ္
ဗဟုသုတေတြလဲရပါတယ္ သိုင္းဝိဇၨာ websiteလဲ အရွည္ခန့္၍ တည္တန့္အါေစဗ်ာ
Myo Min Hlaing on January 8, 2018 at 6:56 pm said:
မြင့်နောင် on February 12, 2018 at 11:57 am said:
Naung Naung on February 21, 2018 at 6:38 am said:
Thanks alot of , my brother.be shine
SI THU OO on August 18, 2018 at 2:54 am said:
ပညာရပ္ေတြကို မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ေစတနာထား လက္ဆင့္ကမ္းျဖန္႔ေ၀ေပးတာ ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်။ စာအုပ္တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ယူသြားၿပီး သိမ္းဆည္းထားပါတယ္။ ျမန္မာလူငယ္ေတြ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ဆက္လက္ လက္ဆင့္ကမ္း ျဖန္႔ေ၀ သြားပါမယ္။ ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိပါတယ္။
ပညာရပ်တွေကို မပျောက်ပျက်အောင် စေတနာထား လက်ဆင့်ကမ်းဖြန့်ဝေပေးတာ ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ စာအုပ်တစ်ချို့ကို ကျွန်တော် ယူသွားပြီး သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။ မြန်မာလူငယ်တွေ ကောင်းကျိုးအတွက် ဆက်လက် လက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ေ၀ သွားပါမယ်။ ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်။
Zayar Maung on August 6, 2019 at 8:04 pm said:
Thanks alot for sharing martial art books. I always want to study martial art since it was in my childhood. Now I’ m going to study to play.
LeaveaReply to Thuhtoosan Cancel reply